Soosaaraha Epoxy-ga ee ugu Fiican Soosaaraha Waxsoosaarka & Warshad | Feejignaan
Birta barroosinka Bolt
Barroosinka barroosinka si loo jarjaro shubka
Noocyada cirbadaha ee cirbadaha
304 316 ahama alwaaxa balaadhinta birta ballaadhinta ...
Shiinaha soo saaridda dun kala duwan size hex madaxa gro ...
Dhexdhexaadinta Epoxy xabagta
barroosinka bir bir ah oo bir ah oo bir bir ah ...
Jiilka-Saddexaad Jiilka Undercut Anchor
Xakamaynta Awoodda Sare ee Epoxy Koollo La Abuuray ...
Boqortooyada Midowday 'UK Prudential Concond Bonding Gluive Glu for Dryi ...
Isku dhejiyeyaasha Dhismayaasha Sheybaarada Dhismaha Kiimikada
Xabagta bar beerto waxay leedahay xoog isku xidhka sare, sida pre-gundhig, adkaynta heerkulka qolka, yaraanshaha yar inta lagu guda jiro qallafsanaanta, iska caabin heerkulka wanaagsan, la welded karaa ka dib markii guntin, cimri dherer wanaagsan, iska caabin cimilada, iska caabin gabow, iska caabin dhexdhexaad ah (acid, alkali, Biyaha) Waxqabad wanaagsan, adadag aad uwanaagsan iyo caabbinta saameynta kadib bogsashada, majiro dareerayaal isbeddela, sun aan sun aheyn iyo jawi bey'adeed, saamiga baahinta ballaaran ee kooxaha A iyo B, dhismo haboon iyo astaamo kale.
Meelaha dhismaha ee baararka birta lagu xidho iyo boolal
Godo dalool sida waafaqsan qawaaniinta → ku nadiifi boholaha burushka iyo silsiladda hawada → si gooni gooni ah u walaaq qeybaha A iyo B ku wareeji biraha birta ama fur godka Dhexdhexaad uring daweynta inspection baaritaanka tayada
1. Marka loo eego shuruudaha naqshadaynta injineernimada, daloollo godadka u dhigma ee ku jira maaddada salka (sida shubka). Dhexroor godka, qoto dheer godka iyo dhexroor bar steel waa in lagu go'aamiyaa by farsamo yaqaan ama imtixaanada goobta.
2. Adeegso silsilad hawo gaar ah, burush ama mashiin hawo ah oo la cadaadiyey si aad u nadiifiso siigada ceelka ceelka. Waxaa lagugula talinayaa inaad ku celiso wax aan ka yarayn 3 jeer. Yaanay jirin habaas iyo biyo godka.
3. Boodhka dusha sare ee biraha birta ah kuna nadiifi acetone ama aalkolo.
4. Isku qas qaybaha A iyo B oo u dhigma 2: 1 illaa ay gebi ahaanba isku mid ka noqdaan, kuna shub ceelka la qoday.
5. Wareeji biraha birta ah oo geli gunta hoose ee godka si aad u hubiso in xabagta ay ku buuxsamayso daloolka isla markaana fiiro gaar ah u yeelato ka hortagga dheecaanka xabagta. Hadday lakabka xabagtu buuxsantay iyo in kale waxay si toos ah u saamaynaysaa xoog-qabashada.
6. Inta lagu guda jiro hawsha daaweynta, barroosinnadu waa inay ka fogaadaan khalkhal. Ka dib gelation, waxaa si buuxda looga bogsan doonaa heerkulka qolka 1-2 maalmood.
7. Muuqaal ahaan hubi in daaweyntu caadi tahay iyo in kale. Baararka wax lagu beero ee qaybaha muhiimka ah waxay u baahan yihiin in lagu sameeyo baaritaanno goobta lagala soo baxo si loo hubiyo in xoog-qabashada ay buuxisay shuruudaha naqshadeynta; dhismaha habraaca xiga ayaa la qaban karaa ka dib marka loo qalmo.
Hore: Channel Anchor
Xiga: kiimikada barroosinka
Flat 107, 25 Indescon Square London Boqortooyada Ingiriiska E14 9DG